पूर्व राष्ट्रपति यादवले डा. केसीलाई भेटे, अनशन त्याग्न आग्रह – Health Post Nepal
२०७७ असोज १६ गते १३:११
१९ दिनदेखि चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न माग लिएर आमरण अनशनमा बसेका चिकित्सक गोविन्द केसीलाई पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भेटेका छन्। विश्व अहिंसा दिवसको अवसर पारेर यादवले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत डा. केसीलाई भेटेका हुन्।
उनले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन्। उनले महात्मा गान्धी र सत्याग्रही डा. केसीजस्ता पुरुषहरुकै कारण संसारमा शान्ति र अहिंसाको ज्योति बलेको भन्दै उनले डा. केसीका मागप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
विगतमा पनि केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको र आज पनि अहिंसा दिवसको अवसर पारेर अस्पतालमै भेट्न आएको डा. यादवले बताए।
उनले सत्याग्रही डा. केसी राज्यको अमूल्य सम्पत्ति भएको भन्दै उनको स्वास्थ्य सम्वेदनशीलतामा चिन्ता व्यक्त गरे। साथै चिकित्सक केसीको निरीक्षणमा रहेका चिकित्सकलाई उपचारमा सावधानी अपनाउन पनि अनुरोध गरे ।
‘उहाँको हेरचाह गर्नेदेखि उपचारमा संलग्न सबै प्रशंसायोग्य हुनुहुन्छ। म सरकारलाई पनि गम्भीर भएर उहाँले उठाएका जनताका साझा समस्या समाधानको लागि आग्रह गर्दछु,’ केसीलाई भेटेपछि डा. यादवले भने, ‘जति अहिले समाधान गर्न सकिन्छ, समाधान गर्दै जानुपर्छ।’